येशूलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रुपमा ग्रहण गर्नुको अर्थ के हो?
के तपाईंले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता भनेर स्विकार गर्नु भएको छ? यस प्रश्नलाई बुझ्न, पहिले “येशू ख्रीष्ट”, “व्यक्तिगत” र “मुक्तिदाता” भन्ने शब्द बुझ्न आवश्यक छ।
येशू ख्रीष्टको हुनुहुन्छ? धेरै मानिसहरु येशू ख्रीष्ट एक असल मानिस, माहान शिक्षक वा एक परमेश्वरका भविष्यवत्ता हुन् भनेर मान्न तयार हुन्छन्। यी कुराहरु भन्ने हो भने सबै साँचो हो, तर यसले उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर वास्तविक्तामा व्याख्या गर्न सक्दैन। बाइबलले यो भन्दछ कि येशू देहधारी हुनुभयो, परमेश्वर मानव बन्नुभयो (यूहन्ना १:१,१४)। परमेश्वर यस संसारमा हामीलाई सिकाउन, निको पार्न, सुधरन, क्षमा दिन - र हाम्रालागि ज्यान गुमाउन आउनुभयो! येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता, सार्वभौम प्रभु, के तपाईंले यस येशू प्रभुलाई स्विकार्नु भएको छ?
मुक्तिदाता के हो? र हामीलाई मुक्तिदाता किन चाहिन्छ? बाइबलले हामीलाई भन्दछ हामी सबैले पाप गरेका छौँ; र हामीले दुष्ट कार्यहरु अपनाएका छौँ (रोमी ३:१०-१८)। फलस्वरुप, हामी परमेश्वरको न्याय र क्रोधको योग्य छौँ। हामी हरूले अनन्त परमेश्वरका विरुद्ध गरेका पापको निम्ति संजाय अनन्त दण्ड भोग्नु पर्ने हो (रोमी ६:२३, प्रकाश २०:११-१५)। यसैकारण हामीलाई मुक्तिदाता चाहिन्छ!
येशू ख्रीष्ट पृथ्वीमा हाम्रो खातिर प्राण दिन आउनुभयो। येशूको मृत्युले हाम्रा पापको लागि अनन्तको ज्याला उहाँले चुत्ता गर्नुभएको थियो (२ कोरन्थी ५:२१)। येशू हाम्रो पापको मुल्य तिर्न मर्नुभयो (रोमी ५:८)। येशूले हाम्रो ॠण तिर्नुभयो ताकी हामीले त्यसको चुत्तागर्नु नपरोस्। येशूले मृत्युबाट बौरी उठेर यो साबित गर्नुभयो कि उहाँको मृत्युद्वारा हाम्रो पापको मुल्य तिर्न सफल हुनुभयो। यसकारण येशू एकमात्र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ (यूहन्ना १४:६, प्रेरीत ४:१२)! के तपाईंले येशूलाई मुक्तिदाताको रुपमा विश्वास गर्नु भएको छ?
के येशू तपाईंको व्यक्तिगत मुक्तिदाताको हुनुहुन्छ? धेरै मानिसहरु ख्रीष्टियन हुनुको मतलब केवल चर्चमा जानु, धर्मिक काम गर्ने, कुनै पाप नगर्ने भनि भन्छन्। तर त्यो ख्रीष्टियन होईन। साँचो ख्रीष्टियन बन्नु भनेको येशू ख्रीष्टसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध राख्नु हो। येशूलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्नु उहाँमा विश्वास र भरोसा गर्नु हो। कोहि पनि अरुको विश्वासद्वारा बच्न सक्दैन। न त कोहि एकले असल कार्य गरेर क्षमा पाउन सक्दैन। मुक्ति पाउन एक मात्र बाटो येशूलाई मुक्तिदाता भनी स्वीकारनु हो, उहाँको मृत्युले हाम्रो पापको मोल तिरेको छ र उहाँको बौरी उठाईले हामीलाई अनन्त जीवनको दिएको हो भनि भरोसा गर्नु हो (यूहन्ना ३:१६)। के येशू तपाईंको व्यक्तिगत मुक्तिदाता हुनुहुन्छ?